Adjustable Yazvino Dunhu Remake
Fittings Uye Puncture Clamp
Miniature Dunhu Rinotyora
Nezve zvigadzirwa foto
Yese mifananidzo iri pane ino webhusaiti inotorwa nemhando. Nekuda kwechiedza chakasiyana uye kuratidzwa, pachave nemusiyano weruvara mumifananidzo. Ndokumbira usarudze nokungwarira kana iwe usingakwanise kugamuchira mutsauko wevaravara, uye usazvitore sechikonzero chekudzoka.
Kamwe kuwana dhipoziti zvakajairika nemazuva manomwe kuendesa, Asi zvinoenderana neodha yakawanda.
Nezve Express uye kambani yekutumira uye masampuli
Taura kutanga sarudza DHL, FEDEX, UPS uye zvichingodaro, Uye negungwa zvakajairika shandisa MSK kambani, Kune sampuli isu tinogona kusunungura 1-2Pcs asi mutengi anoda kubhadhara kutakura mitoro.
About mushure mekutengesa
Kana ukasangana nezvinetso mukumisikidza uye nekushandisa, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu, isu takagadzirira kupa hunyanzvi hutungamiriri.
Nezve kudzoka uye kuchinjanisa
Kana icho chigadzirwa chiri dambudziko remhando yepamusoro, ndapota taura nesu chero nguva, isu tichagadzirisa nazvo iwe panguva yekutanga, uye isu tinodzoreredza nhumbi
1. Tisati tatengesa, isu tinopindura mibvunzo yako nehunhu hunodziya uye neruzivo rwehunyanzvi. Kana zvichidikanwa, isu tinokupa iwe sosi yekusimbisa. Panguva imwecheteyo, tinokugamuchira noushamwari kuti ushanyire fekitari yedu.
2. Mushure mekusimbisa chinangwa chekushandira pamwe, tinogona kusaina chibvumirano chekutengesa kuti tipe kuchengetedzwa zviri pamutemo.
3.Flexible mubhadharo nzira: Western Union kana kambani account, yakavanzika kuchinjisa, nezvimwe.
4. Online chigadzirwa mutengo ndewekureva chete. Nekuda kweshanduko inogara iripo yezvinhu zvakasvibirira uye mutengo wevashandi, mitengo yezvigadzirwa inochinja-chinja nguva nenguva. Zvese zvigadzirwa zvinoenderana nekutaurirana
Kero: Jingyang Road, Liushi Town, Yueqing Guta, Zhejiang, China
Runhare: 0086 15067740790